Choputa agwaetiti nke Maafushi na Maldives | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Islands, Maldives, njem
Maafushi bụ otu n’ime agwaetiti ndị mmadụ bi na Maldives, nke dị na Kaafu Atoll. Agwaetiti ahụ mebiri emebi na 2004 site na tsunami nke metụtara ọtụtụ agwaetiti dị na mpaghara a. Ihe dị ka mmadụ 2.500 bi n’agwaetiti a, ọ bụ ezie na ọ na-enweta ọtụtụ ndị njem nleta n’ihi na ọ bụ obere paradaịs.
Ka anyị lee ihe a ga-ahụ na ime n'àgwàetiti a na Maldives, otu n'ime ihe ndị kachasị chọọ mgbe ọ na-achọ izu ike ma ọ bụ na-eme njem ịhụnanya. Maka na agwaetiti a abụghị ihe niile na - egbu mmiri, anyị ga - ahụ ihe agwaetiti Maafushi na - enye anyị.
1 Ihe ịmara banyere Maldives
2 Ihe ị ga-ahụ na Maafushi
Ihe ịmara banyere Maldives
Republic a nke dị n’Oké Osimiri India nwere ọtụtụ agwaetiti. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha na-adabere na njem nlegharị anya n'ụsọ osimiri, ebe ọ bụ na ha nwere nnukwu ihu igwe na mmiri doro anya na atolls. Mgbe anyị na-aga Maldives anyị rutere ọdụ ụgbọ elu Malé, isi obodo ya. Ọ bụ ebe ahụ ka anyị ga-abata na mbata anyị. Site na isi obodo ị nwere ike iru agwaetiti dị iche iche na agwaetiti dị iche iche site n'oké osimiri ma ọ bụ site na ikuku site n'oké osimiri. Ọ bụrụ na ị bịarute mgbe elekere anọ nke ehihie ga-ehi ụra na Malé. Gagharị na agwaetiti na agwaetiti dịtụ mgbagwoju anya, yabụ ị ga-emegharịrị maka oge ndụ dị jụụ na, karịa ihe niile, ọ dị mfe ịchọta onwe gị n'àgwàetiti ahụ pụọ na ihe niile.
N'agwaetiti ndị a ka ọ dị ihe isi ike iji nweta ihe nrụpụta na ngwaahịa. Ọ bụ ya mere ihe niile ji adị oke ọnụ, ebe ọ bụ na ọ siri ike ịmegharị ihe niile. N'ụzọ dị otú a, a na-atụ aro ka ị weta ihe ndị anyị chọrọ, n'ihi na anyị nwere ike ghara ịchọta ihe anyị na-achọ ebe ahụ. Karịsịa, ọ dị mkpa ka ị ghara ichefu ọgwụ anyị ma buru oke zuru oke. Alsokwesịrị iburu ihe niile site na anwụ na-acha ọcha na ngwaahịa ịchọ mma. Mma mma karịa mwute.
Oge kacha mma iji gaa Maldives bụ site na Nọvemba rue Eprel, ebe ọ bụ na mgbe ahụ ka ọ ga-abụ na mmiri adịghị ezo. Oge udu mmiri na-amalite na Mee wee kwụsị na Ọktọba, yabụ ọ bụrụ na anyị gara ụbọchị ndị a, anyị ga-ahụ ọnụahịa dị ala kamakwa enwere ike ịme mmiri ozuzo nke ukwuu n'oge ezumike anyị na-emebi atụmatụ anyị niile.
Mgbe ị na-achọ ebe obibi, buru n'uche na ntụrụndụ gụnyere ọtụtụ ọrụ na mmemme. Mana ndị a anaghị etinye ya na onyinye niile anyị nwere ike ịchọta. Gbaa mbọ hụ na mmemme, nnyefe ụgbọ mmiri na agwaetiti ndị ọzọ ma ọ bụ mgbakwunye nwere ihe a na-akwụ iji zere ihe ịtụnanya na-atụghị anya mgbe anyị rutere.
La ọdịbendị na agwaetiti bụ Muslim. Ọ bụ ya mere na anaghị anabata mmanya na-egbu egbu n'èzí ebe ezumike na bikini anaghị anabata n'ọtụtụ osimiri. Ọ bụrụ na ịchọrọ iso mmadụ na-emekọrịta ihe, ị nwere ike ị haveụ tii na obere obodo dị na agwaetiti ụfọdụ. Naanị narị abụọ n’ime ihe karịrị otu puku agwaetiti bi na Maafushi bụ otu n’ime ha.
Ihe ị ga-ahụ na Maafushi
Maafushi bụ ebe dịtụ iche karịa ihe ị ga-atụ anya n'aka Maldives. On a agwaetiti ahụ njem nleta nke obodo, na-enye ndị bi n'àgwàetiti ahụ ọrụ ma na-ezere nnukwu ebe ntụrụndụ ndị mara mma. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ahụmịhe dịdebere ndụ ndị bi n'agwaetiti ndị a, ị ga-agarịrị na Maafushi. N'agwaetiti a, ụlọ ndị ọbịa na-apụta, nke bụ ụlọ ndị njem nleta maka ego siri ike.
N'ime ihe omume enwere ike ime n'àgwàetiti ahụ, nleta na bikini bikini pụtara ìhè, nke bụ otu n'ime ole na ole na Maldives. Na ndakpu mmiri na iku mmiri bụ otu n’ime ihe omume na-atọ ụtọ. Enwere obere azu shark di n’agwaetiti mana ha adighi emeru ahu, ya mere anyi agaghi enwe nsogbu. Nwere ike ịhụ mbe, mantas na azụ azụ nke ebe okpomọkụ. You ga-ajụ kedu ebe kachasị amasị anyị ịmaba, mana nke a bụ ihe anyị ga-eme ee ma ọ bụ ee mgbe ị gara ileta Maafushi.
na etiti ndi mmadu enwere ike ịchọta ụlọ akwụkwọ ahụ, nke bụ n'ezie ihe ụlọ nzukọ obodo ga-abụ ebe a. Enwere ụlọ alakụba na ama egwuregwu. Enwere ụlọ mkpọrọ na agwaetiti a mana ọ dị anya site na mpaghara obodo.
na ájá ma ọ bụ ájá ájá Ha bụ otu n'ime ebe dị mma agwaetiti a, yana agwaetiti ndị ọzọ dị na Maldives. Mmiri ahụ na-ekpuchi ebe ndị na-emighị emi, ọ bụ ya mere ị ga-eji nwee ike ịnụ ụtọ sandbars a gbahapụrụ agbahapụ nke ị nwere ike ịga ebe anyị na-achọtakwa mmiri nke na-ekpuchi obere ma nwee ụda mkpuchi turquoise dị egwu. Foto a na - enweghị isi bụ otu n’ime ihe a na - achọkarị mgbe ị gara n’agwaetiti ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ na Maafushi na Maldives